पारसको बानीले आजित बनेपछि छोराछोरी पनि टाढिए…! – ईमेची डटकम
पारसको बानीले आजित बनेपछि छोराछोरी पनि टाढिए…!
काठमाडौं- पूर्व युवराज पारस शाहको आनीबानीले परिवारका सदस्यहरु आजित बनेका छन् ।
पारस पत्नी हिमानी शाह र छोराछोरीहरुको छवि लोकप्रिय बनिरहेका बेला पारसको उदण्ड स्वभावले उनीहरुलाई पनि असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पूर्व राजपरिवार रहेको छ ।
आफू राजा हुनका लागि नजन्मिएको र राजसी ठाँटको मान्छे पनि नभएको पारसले बताएका छन् । ‘मोटरसाइकलमा हिँड्दा स्वतन्त्र हुन्छु, त्यसैमा हिँड्छु’ पारसले भने,‘म साधुको जस्तो जीवनशैली बिताउँछु ।’